CHIHUAHUA DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Chihuahua Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Labka Chihuahua, 'Vians Big Mac Attack, oo lagu naaneeso Mac-na waa jaakad aad u qurux badan oo madow oo midabkeedu gaaban yahay oo leh tufaax madaxiisa kaamil ah. Waxaa qiimeeyay inuu yahay Perfect dhowr garsoore. Lahaanshaha sawirka Vian Kennels ka arag Mac badan Sawirada Chihuahua Bogga 1
Chihuahua waa eey yar oo baaxad weyn leh. Jidhku wuu ka dheer yahay inta uu dheer yahay. Madaxa sifiican ayuu u wareegsan yahay, tufaax qaab ahaan iyo xuubka ayaa gaaban oo tilmaamaya joogsi si fiican loo qeexay. Eydu waxay leeyihiin meel jilicsan oo ku taal dusha sare ee qalfoofka oo loo yaqaan 'molera,' kaas oo badanaa ku xirma qaangaarnimada. Indhaha waawayn, wareegsan si fiican ayaa loo kala saaray waana madow yihiin, ruby, waxaana laga yaabaa inay ka fudud yihiin eeyaha cad. Midabka indhuhu wuu kala duwan yahay oo badiyaa waa madow yihiin, laakiin hiddo-wadaha meerisku wuxuu soo saari karaa eey indho buluug ah . Dhegaha kacsan ayaa waaweyn. Waxaa laga yaabaa in la tirtiro Dabada ayaa dheer, oo qaab-sickle ah oo ama gadaal ama dhinaca u laaban. Koodhku wuxuu noqon karaa mid gaaban, dheer oo jilicsan ama fidsan. Dhammaan midabada, labadaba mid adag, calaamadeysan ama la buufiyay waa la aqbalaa Midabbada waxaa ka mid ah, madow, caddaan, laabta, fawnka, ciida, qalinka, buluugga, buluuga birta, madow & tan iyo midabka midabka leh.
Chihuahua waa eey wehel fiican leh. Geesinimo, nolol aad u fara badan, sharaf iyo dhiirranaan leh, waxay ku raaxaystaan ​​kalgacal. Geesinimo, rayn-rayn iyo deg-deg, Chihuahuas waa la adkeyn karaa iyada oo aan la helin hoggaan wanaagsan oo aadanaha. Way daacad yihiin oo waxay ku xirnaadaan milkiilayaashooda. Qaarkood waxay jecel yihiin inay wajiga ka leexdaan milkiilaha. Si wanaagsan u dhexgeli iyaga . Qaar ka mid ah, way ku adkaan karaan in la tababaro, laakiin waa kuwo caqli badan, si dhakhso leh wax u barta, oo si fiican uga jawaaba tababarka saxda ah, laakiin adag (xoojinta wanaagsan). Waxaa laga yaabaa in adag tahay in guriga la dumiyo . Ha u oggolaan Chihuahua inay la baxdo waxyaabo aadan u oggolaan doonin eey weyn inuu sameeyo ( Cudurka Dog yar ), sida ku boodboodaya aadanaha . In kasta oo ay qurux badan tahay eey 5-rodol ah oo yar si uu farahiisa u saaro lugtaada marka aad shaqada ka timaaddo, waxay kuu oggolaaneysaa dabeecad xoog badan. Hadaad u ogolaato eeygan yar inuu kaa noqdo hogaamiyaha xirmada waxay horumarin doontaa arrimo badan oo dhaqanka ah sida masayrka, ku xadgudubka eeyaha kale iyo mararka qaarkood aadanaha, waxayna noqon doontaa mid aan shaki ku jirin inay ka shakiso dadka marka laga reebo milkiilaha. Markay shisheeyayaashu joogaan, waxay bilaabi doontaa inay la socoto dhaq dhaqaaq kasta oo milkiilaheeda ah, iyadoo ay ku dhowdahay sida ugu macquulsan. Chihuahua oo ah hogaamiyaha guud ee aadanaha ayaa laga yaabaa inay ku dhacdo carruurta. Cunnadan guud ahaan laguma talin karo carruurta, sababtuna maaha iyaga oo aan ku wanaagsanayn, laakiin sababta oo ah dadka intooda badani waxay ula dhaqmaan Chihuahua si ka duwan sidii ay u eegi lahaayeen, taas oo keenaysa inay noqoto mid aan la aamini karin. Cabirkeeda darteed, noocani wuxuu u eg yahay mid la babixiyo oo waxyaalaha aan bini aadamku si cad ugu aragno inay yihiin dhaqan xumo eyga weyn ayaa loo eegay sida eyga yar. Eeyaha yaryar ayaa waliba noqda socod yar , sida aadanuhu u maleeyo inay helaan jimicsi ku filan oo kaliya hareeraha maalintii. Si kastaba ha noqotee, socodku wuxuu bixiyaa wax ka badan jimicsi. Waxay bixisaa kicin maskaxeed waxayna qancisaa dareenka hijrada eeyaha oo dhan leeyihiin. Sababtaas awgeed, noocyada yaryar sida Chihuahua waxay u muuqdaan inay noqdaan boob, yappy, ilaalin iyo kalsooni darro carruurta iyo aadanaha aysan aqoon. Chihuahuas oo ah hoggaamiyaha xirmooyinkooda aadanaha waxay u muuqdaan kuwo si caddaalad ah u eey-dagaal badan. Milkiilaha taas garanaya oo ula dhaqmaya Chihuahua si ka duwan sida ay u dhaqmi lahaayeen nooc weyn, noqoshada hoggaamiye bayaan cad, ayaa ka heli doona dabeecad ka duwan, soo jiidasho leh eeygan yar ee cajiibka ah, isagoo u arka inuu yahay wehel wanaagsan oo cunug ah.
Dhererka: 6 - 9 inji (15 - 23 cm)
Miisaanka: 2 - 6 rodol (1-3 kg)
U nuglaanshaha rheumatism, qalafsanaanta qalalan, hargabka iyo dhibaatooyinka ciridka. Sidoo kale qallalka jirka iyo glaucoma labaad, sababtoo ah indhahooda soo baxa. Miisaan buu yeeshaa si fudud. Ka taxaddar alaabada sunta leh sida shukulaatada ama bacriminta. Tani waa nooc aad u yar oo wax badan kuma qaadan doonto in lagu sumeeyo. Chihuahuas badanaa waxay ku dhashaan qalliinka qalliinka maxaa yeelay eeydu waxay ku dhashaan madax weyn. U nugul jajabka iyo shilalka kale ee eey. Qaar ka mid ah Chihuahuas waxay leeyihiin mooram, waa qayb aan xirnayn oo ka mid ah dhakada taasoo sii furnaan karta nolosha oo dhan. Tani waxay eey ka dhigeysaa mid u nugul dhaawac. Leh u janjeera inuu hindhiso oo uu khuuro sababtoo ah muzzagooda yar yar. U nugul culeyska fekerka, oo ay sabab u tahay milkiileyaashu inay ula dhaqmaan sida carruurta yaryar. Dhammaan eeyaha, xitaa kuwa yaryar, waxay u baahan yihiin inay dareemaan in milkiilayaashoodu yihiin dad maskax adag oo awood u leh inay xiraan xirmada oo dhan.
Cudur u muuqda inuu ku sii kordhayo Chihuahuas waa GME, oo u taagan Granulomatous Meningoencephalitis. Waxay ku soo noqnoqonaysaa madaxa tufaaxa Chis. Waa, waqtigaan, cudur aad u liita oo la fahmay habka neerfaha oo si lama filaan ah ugu dhaca digniin la'aan. Wuxuu ku yimaadaa seddex nooc: focal (lesions in the brain or spine) multifocal (nabarro maskaxda iyo lafdhabarta labadaba iyo waliba indhaha) iyo indhaha (oo keena indho la'aan. Waxaa jira habab dhowr ah oo hada lagu daweeyo oo hada sii soconaya lana cusbooneysiinayo sida In kasta oo ay jiraan habab lagu xakameeyo eeyahaas ka badbaaday labada toddobaad ee ugu horreeya, nasiib darro, ma jirto daawo run ah.Waxay geli kartaa cafis, mararka qaarkood sannado, laakiin marwalba way soo noqon kartaa. iwm bilowga si si sax ah loo ogaado, qiimaha waa kumanaan iyo kuwa badan, kumanaan badan oo kale ayaa u baahan doona in lagu qarash gareeyo sanadaha u haray nolosha eyga, halka GME ay ku dhacdo noocyo kale oo badan (guud ahaan dhalada toy in kastoo ay jiraan qaar kale, waxaa jira tiro aad u tiro badan oo Chihuahuas ah oo ay la socdaan. Arrin xiiso leh, madaxa deerada Chihuahua's uma muuqdo inuu u nugul yahay GME, kaliya nooca tufaaxa-madaxa.
Waxay yihiin eeyo yar yar oo ku habboon nolosha guryaha. Chihuahua waxay jeceshahay cimilada diiran oo ma jecla qabowga. Waxay ubaahanyihiin boos sidii eey kasta oo kale. Sababta oo ah way yar yihiin macnaheedu maaha in lagu hayn karo meel aad u yar.
In kasta oo ay tahay mid duufsan oo lagu xambaarayo xayawaanadan dhadhanka badan, kuwan waa eeyo yar yar oo firfircoon oo u baahan a socod maalinle ah . Cayaartu waxay daryeeli kartaa baahiyo badan oo jimicsi ah, hase yeeshe, sida noocyada oo dhan, ciyaartu ma buuxin doonto dareenkooda aasaasiga ah ee socodka. Eeyooyinka aan helin socodka maalinlaha ah waxay u badan tahay inay soo bandhigaan noocyo kala duwan dhibaatooyinka dhaqanka , iyo sidoo kale arrimaha neerfaha. Waxay sidoo kale ku raaxeysan doonaan rooti wanaagsan oo ka baxsan aagga furan ee ka baxsan leedhka, sida deyr weyn, oo ood leh.
Qiyaastii 15 sano ama ka badan.
Qiyaastii 1 ilaa 3 eyyo
Jaakadda jilicsan ee gaaban, waa in si tartiib ah loo cadaadiyo mararka qaarkood ama si fudud loogu tirtiro maro qoyan. Koodhka dhaadheer waa in lagu cadaydo maalin kasta burush jilicsan oo jilicsan. Ku maydh labada noocba hal jeer bishiiba, adiga oo ka taxaddaraya in aanay biyo dhagaha ka gelin. Hubso dhagaha si joogto ah oo ciddiyaha ha la jaro. Noocani waa celcelis daadiya.
Tani waa noocyada ugu da'da weyn qaaradda Ameerika iyo tan ugu yar adduunka. Native to Mexico, halkaas oo ay magaceeda ka heshay Gobolka Mexico ee Chihuahua. Waxaa kaliya la keenay Yurub dhammaadkii qarnigii sagaal iyo tobnaad. Noocyada loo isticmaalay in lagu sameeyo Chihuahua ma cadda, laakiin qaar waxay u maleynayaan inuu ka yimid Fennec Fox. Eeyadu waxay muqaddas u ahaayeen waddammada Hindiya ee Pre-Columbian waxayna sidoo kale ahaayeen xayawaan caan ku ah fasalka sare. Eeyaha ayaa lagu qiimeeyaa cabirkooda waxaana aad ugu qiimeeya dadka jecel qaar markay culeyskoodu hoos u dhacayaan 2-1 / 4 rodol (1.3 kg).
Waxaan Stoli helnay (midig) 3 sano ka hor markii aan dhigan jirnay kuleejka bariga UNC. Sawirka koowaad waa iyada oo 7 toddobaad jirsanaysa. Iyadu waa jaakad gaaban oo fawn madow leh. Markii ay sii weynaatay sableygii madoobaa wuu yaraaday waxayna ku dhowdahay gabi ahaanba fawn marka laga reebo xariijimaha madow ee dabada ku haya. Waxay ahayd inaan si adag u shaqeyno si aan uga ilaalino inay hesho ' cillad yar oo ey , 'taas oo ka dhigaysa noocyo fara badan oo ay caruurtu ku ciyaaraan inay yappy yihiin oo aysan necebayn shisheeyaha. Waxay xiriir la yeelatay asxaab badan iyo xubno qoyskeeda ah waxaanan u kaxeystay fasal aniga iyo baska. Xitaa waxaan watay ilaalinteeda iyada oo hadda waxay jeceshahay carruurta oo aan ahayn astaamo caan ku ah eeyaha yaryar. Shaqada adag awgeed ula dhaqan sidii eey oo kale oo ma ahan wax yar oo jilicsan oo jilicsan ay aad u tahay si wanaagsan u dhaqmay oo aan laga cabsan dadka iyo hareeraha cusub. Waxay sidoo kale ogtahay in ka badan 15 khiyaano oo ay jeceshahay inay fuliso! Stoli waa 3.8 rodol ku dhowaad 3 sano. Muddo bil ka hor ah ayaan go'aansanay inaan u helno saaxibo Stoli oo ah cabirkeeda. Sawirkan ugu horreeya waa Roxi 8 toddobaad iyo 15 wiqiyadood. Iyadu waa Chihuahua oo timo dheer leh waana inay soo kacdaa ilaa 3-3.5 rodol qof weyn. Timaheeda dhaadheer oo buuxa ma bislaan doonaan ilaa ay gaarto qiyaastii 1 1/2 sano jir, inta ka horeysana waxay mari doontaa 'uglies uglies' taas oo ah marxalada xun ee dhalinyarada loogu talagalay noocyada dhaadheer ee dhererka udhaxeeya eeyadooda iyo jaakadaha waaweyn. Midabkeedu waa farsamo ahaan madow iyo midab buluug ah lehna qayb qoorta cad iyo cagaha cad. Waxay sidoo kale leedahay calaamado merle oo siinaya jaantuskeeda buluug iyo madow midabkeeda. Hidda-wadaha 'merle' wuxuu ka eegaa midabka ugu badan qaybta madow ee jaakadeeda iyadoo ka tagaysa meelaha cawlan / buluugga ah. Waxay sidoo kale saameyn ku yeelatay midabkeeda indhaha, oo marmar ka buluugsan bunni. Merle Chihuahua waa laga mamnuucay qaar ka mid ah ururada adduunka oo dhan, laakiin AKC wali way u oggol tahay giraanta showga. Sababta tan ayaa ah welwelka caafimaad ee suurtogalka ah ee la xiriira hidda-wadaha. Laakiin waxaan jecel nahay Roxi yar oo geerida ah iyadaana gabi ahaanba caafimaad qabta oo dhaqso u koreysa! Lug ku dhex lugaynta magaalada labadan ayaa si joogto ah naloogu joojiyaa in nala weydiiyo eeyaha ay yihiin iyo inay noo sheegaan sida ay u qurux badan yihiin. Dhawaan waxaan maqalnay carruur ku qeylinaya 'Hooyo fiiri inay ka yimaadeen Beverly Hills!' sababtoo ah filimka cusub ee Disney. '
'Kuwani waa dhallaankayaga Chi, bidix: Maxwell (6 bilood), Milo (9 bilood) iyo Matilda (sidoo kale 9 bilood). In kasta oo Milo iyo Matilda ay ku jiraan dhinaca weyn ee miisaanka Chi ee 7 iyo 9 lbs., Maxwell wuxuu ku jiraa cabirka celcelis ahaan qiyaastii ah 4½ lbs. Milo xoogaa waa ka sii jilicsan tahay dhinaca caajiska ah marka la barbar dhigo labada kale mararka qaarna wuu fariisan doonaa oo daawanayaa kuwa kale oo ciyaaraya. Isaguba wax xoogaa kalsooni la’aan ah oo aan kula shaqeyneyno. Dhammaantood waa kuwo aad u jecel laakiin marwalba waxay ka walwalsan yihiin inay la wadaagaan dhunkashadooda aadanaha iyo midba midka kale si isku mid ah. Mararka qaarkood waxay u jiifsan doonaan qorraxda iyagoo midba midka kale wejigiisa iska maydhayo oo hubinaya inay dhammaantood sida ugu fiican u muuqdaan. Markaa waxay daadin doonaan busteyaal, barkimooyin, iwm ilaa ay ka ifinayaan illaa ay ku filan yihiin si ay ugu raaxaystaan ​​ka dibna ay u sii amba qaadaan hurdo dheer. Halka midkoodna uusan ahayn ' alfa '(Taasi waa shaqada aadanaha, saw maahan?!) Dumarkeenna, Matilda ayaa ah tan ugu awoodda badan kooxda. Haddii ay rabto inay ciyaarto, waad ka fiicnaan lahayd inaad ciyaarto haddii kale waxaad heli doontaa 'dameer laad' illaa ay ka hesho falcelin. Dumarka caadiga ah! (iyo haa, waan dhihi karaa taas maxaa yeelay dumar baan ahay!: o)
Waxaan waligey ahaa qof eey weyn ah runtiina ma jecli eeyaha yaryar . Si kastaba ha noqotee, markii aan rabay wax cusub oo ku soo kordha gurigeenna, waxaan sameeyay baaritaankeyga oo waxaan helay Chihuahua oo sida ugu habboon ugu habboon eeyga. Sida muuqata way ka sarreeyeen filashadaydii markii aan ka soo gudubnay hal ilaa saddex Chihuahua 3 bilood gudahood oo aan gebi ahaanba ka qoomamayn.
'Waxaan daawanayay bandhigyada Cesar Millan muddo dhowr bilood ah haatan waxaana bilaabay inaan adeegsado farsamooyin badan. In kasta oo eeydu weli yar yihiin oo ay yihiin shaqo socota sida badankood, waxaan u maleynayaa adeegsiga farsamooyinkan inay ka caawin doonto inay noqdaan dad waaweyn oo isku dheelitiran. Dabcan, inbadan oo aan daawado, waxbadan ayaan barto sidaa darteed sidoo kale waxaan ahay ' hogaamiyaha xirmada shaqada ayaa socota. Wiilashayda ayaa durbadiiba ka fekeraya natiijada iyo tusaale ahaan taas sida aad u aragto inay si fudud 'u awoodaan' sawirrada. : o) '
'Jasper waa meeris buluug ah oo 9-toddobaad jir ah oo Chihuahua culeyskiisu yahay 1.4lbs. Waa argagixiso yar, laakiin waa wiil wanaagsan. '
'Daanyeer waa 10-toddobaad Chihuahua. Waxay magaceeda u heshay Daanyeer maxaa yeelay waxay marwalba garbahayga saartaa oo ay jeceshahay mooska, markaa waxaan u maleeyay 'Daanyeer' runti inay ku habboon tahay. Aad iyo aad ayey u ciyaareysaa waana farxad ay leedahay. Waxay tahay gebi ahaanba suuf loo tababaray hadda oo og fadhiiso ! Waxay la nooshahay 2 qof oo waaweyn, 2 dhalinyaro ah (15 iyo 16) iyo 2 caruur ah oo yar (7 iyo 11) qof walbana way jeceshahay. Laakiin, aad buu iigu xiran yahay (waxaan ahay 16). Daanyeer waxaa lagu qiyaasaa culeyskiisa ilaa 3 rodol. buuxa. Iyadu waa qof aad u caqli badan oo leh akhlaaq wanaagsan, si la yaab leh. Daanyeer waa hubaal a lapdog oo meel walba igaga raacaa !! Jecel raacida baabuurta waana mid aad u si fiican u dhexgalay . Waxaan daawaday Cesar Millan qiyaastii 3 sano hada waxaan aqriyay buugiisa. Waa mid cajiib ah oo wax badan iga baray cilmu-nafsiga eeyga, runtii isagu waa sanamkayga. Daanyeer waa eey si wanaagsan isu dheellitiran waxaanan baray carruurteeda inaysan maskaxdu u degin igu dul socod dhammaan ama isku day inaad si kasta ii xakameyso. In kasta oo ay qudhuntay qudhun, iyadu waa garanayaa cida madax ah . Ma qiyaasi karayn noloshayda la’aanta Daanyeerkeyga oo sannado badan ayaan sugayaa. Waxaan KELIYA heli doonaa Chihuahuas waa nooc cajaa'ib leh oo runtii farxad ii ah inaan helo !!
'Tani waa 8-bilood-jirkeenna, 4.5-lb. Chihuahua Tequila. Waxaan ugu yeernaa Tiqi magaca naanays oo waxaan u jecel nahay illaa dhimasho. Way firfircoon tahay waana ku faraxsanahay inaan arko liisaska boggaaga inay ahaadaan socday maalin kasta . Dad badan ayaa u maleynaya in maadaama ay aad u yar tahay, aysan u baahnayn, laakiin dabeecaddeeda ayaa aad uga wanaagsan marka la jimicsado. Iyadu waa dad aad u bulsheed waxayna aaminsan tahay in qof kasta oo ay aragto uu halkaas u joogo faa iidada kaliya ee iyada ku jirta. Weligeed weligeed ma baran baraarug, taas ayaa noo fiican. Waxay si fiican ula shaqeysaa eeyaha kale iyo carruurta waana caqli badan tahay! Waxaan awoodnay inaan barno inay fariisato, labada rux ee midig iyo bidixba ruxruxdo, iyo 'bilic quruxsan' usbuuc gudihiis! Tani waa iyada oo isu diyaarineysa sariirta PJ-keeda.
sawirrada shaybaarada da 'kala duwan
Kani waa Boo, oo ah mid sifiican u wada madow Chihuahua oo 1 sano jir ah, culeyskiisuna yahay 6 rodol. Midab adag maaha midab caan ku ah nooca Chihuahua.
Cunto shukulaato ah oo qaan gaar ah Chihuahua
Shukulaato midab leh oo Chihuahua ah
'Blondie, Chihuahuakeenu waa 9 sano jir wuxuuna nala socday 5 sano ka mid ah. Blondie wuxuu fuulay 1000 mayl. Waxaan ku raacnaa safarro dhaadheer. Haddii aan u istaagno inaan wax cunno waxay haysataa boorso ay si deggan u fadhiisato intaan wax cuneyno (dabcan cuntada iyada ayaa loogu dhex jirayaa bacda). Iyadu waa eeygii ugu yaabka badnaa ee aan abid haysto. Waxay jeceshahay inay nala joogto meel kasta oo aan aadno. Waxaan u sameeyaa boorsooyin fuushan maqaar iyo dharka maqaarka eeyaha. Waxaan ku iibiyaa isu soo baxyada mootada iyaduna waa tusaale fiican. Sawirka aan dirayo waxaa qaaday saaxiibkeen oo aan usii soconay si aan u fuulno Bonnie iyo Clyde ee Louisiana. Eygaygu waa eey dheellitiran. Xaqiiqdii, waxaan u daawanaa Cesar si joogto ah. Mid ka mid ah dhacdooyinkiisa wuxuu ka caawinayey lamaane ku nool California sidii eygoodu, Jack Russell, u fuuli lahaayeen. Bilowga dhacdadaas eeygu wuxuu xidhan yahay mid ka mid ah lebbisyadayda oo laga iibsaday eBay. Jidka markaan ahay, waxaan ahay hagardaamo eey ah sidaa darteed maalin walba way iila shaqeyn kartaa. '
Eeg tusaalooyin badan oo Chihuahua ah
Sawirada Chihuahua 1
Chihuahua Sawirada 2
Sawirada Chihuahua 3
Sawirada Chihuahua 4
Sawirada Chihuahua 5
Sawirada Chihuahua 6
Sawirada Chihuahua 7
Sawirada Chihuahua 8
Eeyaha Chihuahua: Sawirro guryo la ururin karo
meeqa eeyo ayaa tilmaamayaasha jarmalka gaamuray leeyihiin
boston terrier chihuahua iib ah
eey ugaarsi ugaarsi ah oo iib ah
Soshiyaaldimoqoraadiga Pei rottweiler muqisho isku darka